Maxay Puntland kala kulmeen waftigii Nabadda ee Abwaan Hadraawi?
Waftigii nabad raadinta ee uu horkacayay abwaanka soomaaliyeed, abwaan maxamed ibraahim warsame Hadraawi, ayaa si xushmad leh looga soo dhaweeyay dhamaan magaalooyinka Puntland, meelkasta oo ay cagta dhigaanba waxaa soo dhaweenayay shacabka iyo maamulka oo isku duuban.
Magaalooyinka Gaalkacayo iyo Garawe ayaa si diiran looga soo dhaweeyay. magalada Qardhana waxaaba looga soo dhaweeyay Fardo, kuwaas oo hareeraha ka socday gawaarida wafdiga nabad raadinta ee Hadraawi ugana hortagay masaafo dheer, waxaana halkaas kaga hortagay xubna katirsan maamulka kuwaas oo loo xilsaaray soo dhawaynta xubnaha socdaalka nabada ee Hadraawi oo ay ka mid ahaayeen hal abuurayaal kale oo soomaaliyeed sida: mustafa shiikh cilmi, axmaday cabdi gaashaan, maki xaaji banaadir, c/dhuux yuusuf, cabdi maxamuud amiin iyo fanaanada Saynab xaaji cali (Baxsan).
Sikastaba ha ahaatee magaalada Boosooso ayaa waxay kala kulmeen soo dhawayn aanay horay ula soo kulmin, halkaas oo ay kaga hortageen maamulka Dowlada ayadoo meel 60 Km u jirta magaalada boosaaso ay uga hortageen wasiir kuxigeenka xiriirka caalamiga ah maxamed siciid shabeele iyo duqa magaalda boosaaso Bashiir siciid adam iyo ururada bulshada oo ay si wayn uga dhex muuqdeen ururka ardayda puntland (PSA).
Mudadii ay joogeen magaalada Boosaaso xubnaha socdaalka nabada oo ahayd 3 cisho waxay kulmo aad loo soo agaasimay ay layeesheen dadwaynaha magaalada boosaaso iyo maamulka gobolka iyo qaybaha kale ee bulshada, kulamadaas oo kakala dhacay xarunta Gobolka, dowlada hoose, hasa yeeshee tii igu yaabka iyo qiimaha badneyd waxay ka dhacday machadka caafimaadka magaalada boosaaso taas oo ay soo qaban qaabiyeen ururka ardayda puntland (puntland students association PSA).
xafladaas oo ay ka soo qayb galeen xubnaha Dowlada oo uu hogaaaminayo siihayaha xilka madaxawaynaha Gobolka bari ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Eng. Faarax Maxamuud Yuusuf (dooxa joog), wasiir ku xigaha warfaafinta pl mudane C/shukuur Mire Aadam iyo madax kale oo katirsan maamulka. Waxaa kale oo ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah ganacsatada iyo dhalinyarada.
xafladaas oo ugu horeentii ay kalmad ka soo jeediyeen ururka ardayda puntland waxaana akhriyay Maxamed Cabdi Ibraahim taas oo ururku ay ugu tala galeen dhiiri galinta nabada iyo horumarinta bulshada. Kadibna waxaa hadalka si toos ah ula wareegay wafdigii socdaalka nabada, ugana horeeyay abwaan Cabdi Muxumad Amiin kana hadlay ujeedadooda iyo nabdu waxay tahay waxaa kale oo ka haday abwaano faro badan sida abwaan shube, abwaan maki xaaji banaadir, sahal macalin iyo abwaano kale, dhamaantoodna waxay ka hadleen qiimaha nabada iyo baahida loo qabo.
Ugu danbeentii waxaa halkaa ka hadlay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe, wuxuuna intii usan hadalka bilaabin u yeeray Ardaygii u hadlay dhalinyarda maxamed cabdi ibraahim wuxuuna uga mahadceliyay sidii qiimaha lahayd ee u baraarujiyay Dadka ka soo qayb galay xaflada, kadibna waxa oo abwaanku kahadlay ujeedada socdaalkooda asaga oo ku dheeraaday waxa yaalihii ku dhaliyay socdaalka oo uu markii danbe goostay in uu soo wada maro dalka asaga oo sheegay in ay ka caawisay hay'ada isku xirka iyo xuquuqda aadamiga oo uu gudoomiyahooda C/laahi xaaji dayib lasocday, ugu danbeentii waxa uu mahad celin balaaran u soo jeediyay ururka ardayda puntland oo uu sheegay inta ay soo socdeen in aysan lakulmin xaflad soo dhawayn oo tan lamid ah.
Waxaakale oo xafladda kahadlay xubnaha dowlada oo kamid ahaa C/shakuur mire aadam oo ku soo dhaweeyay hadalka sii hayaha xilka madax waynaha Eng. Faarax Maxamuud Yuusuf Dooxa joog, waxa uu ugu horeentii soo dhaweeyay wafidga socdaalka nabada waxana oo siihayahu kahadlay nabada iyo dib u hishiisiinta soomaaliya oo uu sheegay in dhawaan lagu guuleesan doono shirka dib u hishii siinta soomaaliyeed , ugu danbeentii waxa uu mahad u soo jeediyay ururkii qaban qaabiyay howshaan ee PSA, waxana uu sheegay in uu ka qayb galay wax qabad badan oo ururku leeyahay kuna tilmaamay ururka mid aad iyo aad u firfircoon . xafladaas oo ku dhaamaatay jawi aad u wanaag san iyo rayn rayn.
Isku soo wada duub oo waxaa la oran karaa wafdigii nabadu waxay Puntland kala kulmeen soo dhawayn wanaagsan iyo waji furan .